Tantaran’ny toe-karena malagasy : Haranty etsy amin’ny Aft Andavamamba -
AccueilSongandinaTantaran’ny toe-karena malagasy : Haranty etsy amin’ny Aft Andavamamba
20/10/2018 admintriatra Songandina 0
Miditra amin’ny andiany faharoa. Taorian’ny hetsika santatra, ny taona 2016, dia hanomboka ny 23 oktobra izao, ary haharitra hatramin’ny 03 novambra indray ny fampirantiana momba ny toe-karen’i Madagasikara hatramin’ny taona 1960. Ny FTHM Consulting sy ny sampana toe-karena eo anivon’ny fakioltén’ny toe-karena, ny fitantanana ary ny fianarana ny fiarahamonina eny amin’ny Oniversité-n’Antananarivo no mikarakara izany. « Fitantanana, fanalahidin’ny fampandrosoana », no lohahevitra entina amin’ity andiany faharoa ity. Tanjon’ny hetsika sy io lohahevitra io ny fampahafantarana an’i Madagasikara, ary fanentanana ny rehetra ny lanjan’ny tsara tantana amin’ny fampandrosoana maharitra ny firenena. Izany moa dia niainga tamin’ny fahatsapana ny tsy fahalalana amin’ny ankapobeny ny tena zava-misy eto Madagasikara, ny maha-zava-dehibe ny fahalalan’ny olom-pirenena ny tantaran’ny fiarahamonina sy ny toekaren’ny fireneny, ny tsy fanadinoina ny lesona tamin’ny lasa, mba tsy hamerenana ny fahadisoana, ny fanairana ny rehetra amin’ny fanamby tokony hatrehin’i Madagasikara, ary ny fanaizana ny sain’ny rehetra hanana toe-tsaina manakiana amin’ny zava-misy.
Aorian’ny eto Antananarivo dia entina hitety tanàn-dehibe fito io fampirantiana io dia Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Toalganaro, Antsiranana ary Toliara.
Ankoatra ny fampirantiana etsy amin’ny Aft Andavamamba, hanamarika ity hetsika ity ihany koa ireo famelabelarana miainga amin’ny lohahevitra samihafa hotanterahina ny 24 ka hatramin’ny 26 oktobra eny amin’ny Sampam-pianarana Degs eny Ankatso. Lohahevitra telo lehibe no hovelabelariny amin’izany, ary hanasana ireo rehetra liana amin’ny toe-karena toa ny « Fitantanana sy politika ara-toe-karena », « sampandraharaha, fitantanana sy fampandrosoana », ary « Fitanana sy ny sehatra tsy miankina ».
Real Estate dans Fikambanana masoandro mody-NAHAZO FANAMPIANA AVY AMIN’NY VADIN’NY FILOHA
Mitsangana ry Malagasy-TSY NAHALOA VOLAN’OLONA
Famitahana tsotra izao, izay no nambaran’ireo olona nantsoin’ny mitsangana ry Malagasy nanotrona azy ireo tamin’ny famoriam-bahoaka farany nataony teny Andrefanambohijanahary. Nitaraina mantsy ireo olona nangonin’izy ireo satria hatramin’ny androany, mbola tsy voaloa ny vola nampanantenaina ...Tohiny
Fitondrana Rajaonarimampianina : Fomba fanaovana politika vaovao
Fifandraisana amin’ny any ivelany : Hanamafy fiaraha-miasa i Angletera sy Cuba ary Espaina
Firenena Indianina : Hanatsara ny tontolon’ny famokarana eto Madagasikara
Real Estate: I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing.…